Beesha Caalamka oo loogu baaqay in ay ka hadasho cabshada waalidiinta | KEYDMEDIA ONLINE
Beesha Caalamka oo loogu baaqay in ay ka hadasho cabshada waalidiinta
Dalalka daneeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo Urur-rada ay ugu horreyso Qaramada Midoobay, ayaa loogu baaqay in ay ka hadlaan cabashada waaliinta caruurtu ka maqan tahaay ee ilintu kaga dhamaaday wadooyinka magaalooyinka Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Agaasime ku xigeenkii hore ee Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed, Cabdisalaan Guuleed, ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay in dalalka daneeya arrima Soomaaliya ay wali ka aamusan yihiin cabshada waalidiinta dhalinyarada ay dhaleen loo qaaday Eritrea, kadibna laga dagaal galiyay waqooyga Itoobiya.
“Waxaan filayaa inay tahay wax aan la aqbali karin in UN, UK, USA iyo AU ay ka aamusaan arinta askarta ku maqan Eritrea”. Ayuu yiri Guuleed, oo ahaa shaqsigii ugu horreeyay ee baahiyay in ciidamo Soomaali ah ka qeyb qaateen dagaalkii ka dhanka ah TPLF.
“Hooyooyinka ooyaya waxay u baahan yihiin fiiro gaar ah iyo taageero” ayuu sidoo kale yiri, Agaasime ku xigeynkii hore ee NISA, wuxuuna Ergayga gaarka ah ee Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay, James Swan uu ugu baaqay inuu ka hadlo arrinkaan.
Dowladda Farmaajo, ayaa indhaha ka daawaneysa cabashada waalidiinta, in ka badan shan bilood ku bannaan-baxaya inta badan magaalooyinka dalka, waxana la rumeysan yahay in la joogo xilligii ay arrintaan soo faragalin lahaayeen, wakiillo caalami ah.
Waalidiinta, ayaa cabasho ka muujiyay guddi xaqiiqo raadin ah oo dhawaan uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, waxayna ku eedeeyeen Rooble inuu marin-habaabinayo kiiska dhalinyarada, maadaama uu magacaabay guddi aan lagu kalsoonaan karin.